एक्कै छिनमा छालाको डरलाग्दा दाग र चाउरीपन हटाउने अचुक घरेलु उपाय ! - Khabar Nepali
होमपेज / जीवनशैली / एक्कै छिनमा छालाको डरलाग्दा दाग र चाउरीपन हटाउने अचुक घरेलु उपाय !
एक्कै छिनमा छालाको डरलाग्दा दाग र चाउरीपन हटाउने अचुक घरेलु उपाय !
मङ्गलबार, जेठ १८, २०७८
सफा र आकर्षक छाला बनाउने रहर सबैको हुन्छ । यसैकारणले गर्दा मानिसहरु विभिन्न महङ्गा उपचार तथा सौन्दर्य प्रशाधनहरुको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तर यसले चाहेजस्तो परिणाम पक्कै पनि दिन सक्दैन । आज हामी तपाइँलाई यस्तो चमत्कारिक उपायको बारेमा जानकारी दिन्छौं ।
जस्ले तपाइँको छालामा भएको दाग , चाउरीपनलाई छिटै हटाइ छालालाई नरम , सफा र चमकदार बनाउँदछ । यो धेरै नै सरल प्राकृतिक उपचार हो । यस फेसमास्कलाई बनाउन धेरै समय पनि लाग्दैन । त्यसैले फेसमास्कलाई छिटै तयार गरी छालाको दाग , घाउ , खटिरा तथा चाउरीपनाबाट छुट्कारा पाउन सक्नुहुन्छ ।
१) १ चम्चा दालचीनीको धुलो
२) १ चम्चा कागतीको रस
३) १ चम्चा जाइफल
४) १ चम्चा मह
एउटा कचौरामा माथिका सबै सामाग्रीहरुलाई मिसाई बाक्लो मिश्रण बनाउनुहोस् । यदि तपाइँको छाला संवेदनशील छ भने , अलि बढि महलाई मिसाउन सक्नुहुन्छ । महले तपाइँको छालालाई सुनिनबाट बचाउँदछ ।
तर रोसासिया ( छाला रातो हुने रोग ) भएका मानिसहरुले भने यसको प्रयोग सकेसम्म नगर्नुहोस् । किनकी यसले रक्तनलीलाई झन फराकिलो पार्न सक्दछ । केहि मानिसहरु यसको सट्टामा कमेरो ( व्हाइट क्ले ) को प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यदि मिश्रण धेरै नै बाक्लो भएमा थोरै पानी मिसाउन सक्नुहुन्छ ।
यस फेसमास्कलाई लगाउन भन्दा पहिला आफ्नो मुख साबुनपानीले राम्ररी धुनुहोस् । त्यसपछि तपाइँलाई मनपर्ने मोइस्चराइजरलाई लगाउनुहोस् । यसपछि फेसमास्कलाई छालाको दाग , चाउरी भएको ठाउँमा लगाउनुहोस् ।
यसलाई लगाउनाले तपाइँलाई घोचेको वा चिल्लाएको महशुश भएमा पनि नडराउनुहोस् । यसले झन फेसमास्कले असर गरेको कुरालाई सङ्केत गर्दछ । यस विधिलाई हरेक दिन अपनाउनुहोस् । त्यसपछि तपाइँको छाला छोटो समयमा नै चम्किलो , सफा र नरम बन्नेछ ।
गर्भवती श्रीमती हुदा याद गरेरै गर्नु पर्ने यी ९ कुराहरु, बच्चाको पनि सबै कुरा यसले फरक पार्छ
यी चार राशी भएकाहरुले कहिल्यै पनि धोका दिदैनन
रा तो सु केको खो र्सानी प्रयोग गरेर यसरी जमाउनुहोस् दही
के तपाईंले फर्सीको मुन्टो खाने गर्नु भएको छ भने, हेर्नुहोस् यस्तो हुन सक्छ !
२.नायिका आँचल शर्माले श्रीमान र परिवारको खोलिन भित्रि रहस्य (भिडियो), सबै चकित
३.अभिनेत्री आँचल शर्माको नजरमा पल शाह यस्तो रहेछन्, सबै चकित
५.अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु खुला हुने !
६.सातामा दुई दिन बिदा, बजार खोलिने, सवारीसाधन पनि सञ्चालन हुने
७.अस्पतालमा उपचार गराइरहेका एमालेका अर्का चर्चित नेता पनि अस्ताए
८.कोरिया रोजगारी बन्द !